FAQ - bamka Sand, sump saar, saar Gravel saaraha
model kala duwan ayaa qiimaha .Waxaan kala duwan dooran doonaa model ah sida beegyada aad bixiso. ka dibna waxaan soo qaadan oo waxaad ka samaysaa heshiis .si pls horeysay diyaariyo xuduudaha.
No, ma waxaan tirada si ugu yaraan. mararka qaarkood aad u baahan tahay oo kaliya dhali xamuulka ah in aad dekedda, si pls marka hore hubi lacag xamuulka aad forwarder ah.
Haa, waxaan heysanaa koox xoog soo koraya. badeecada la samayn karaa si waafaqsan request.you ii soo diri kartaa sawirka oo annaguna waannu samayn karaa sida.
Haa, waxaan ku siin karaan warqadaha ugu oo ay ku jiraan Certificates of Falanqaynta / waafaqsan; Caymiska; Asal ahaan, iyo waraaqaha kale ee loo dhoofiyo meesha required.also sawir dulmar iyo gudbi sawirka qeybaha.
Waayo-baarka, markii hogaanka ku saabsan tahay 7 maalmood. Waayo, wax soo saarka mass, markii hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag deebaaji ah. The jeer hogaanka u noqon wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay debaajigaaga, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final ee wax soo saarka aad. Haddii jeer hogaanka our ma la xirmin suuqa shaqeeyaan, fadlan u gudbo shuruudaha aad la leedahay sale. In kiisaska oo dhan waxaan isku dayi doonaa in la tixgeliyo baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan inay sameeyaan so.we leeyihiin badan oo dayactir on stock, sidaas darteed mar gaarsiinta mararka qaarkood ma aha wax adag.
deposit 50% ka hor, 50% dheelitirka dhanka ah nuqul ka mid ah B / L. waxaan jeclaan shuruudaha lacag bixinta TT .Oo L / C waa ok.
waayo qaybo ka mid ah, waxaan ku siin damaanad in muddo hal sano ah, laakiin qaybo ayay ilmadeeda, sida caadiga ah waxa ay noqon doontaa .Tani 3-6months ku xiran tahay xaaladda shaqo ee kala duwan ee
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaali packaging.we dhoofinta tayo sare leh ayaa la this dhoofinta muddo ku dhow 16 sano, sidaas darteed, ha ka welwelina baakada.